Do-It-Yourself Guide to Infographics | Ntụgharị asụsụ Martech Zone
Thursday, June 30, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Amaara m ihe ị na-eche… ọzọ infographic? Chere… Amaara m na m nọ na mpịakọta n'oge na-adịbeghị na-ekwusara ozi ahịa ọ bụla m nwere ike ịchọta na Internetntanetị, mana nke a dị ukwuu. Ọ bụrụ na ị na-eche ihe kpatara ihe ọkụ ọkụ ji agba akwụkwọ na Infographics, ndị folks na Voltier Creative emeela… ị nwetara ya… Infographic na-akọwa naanị nke ahụ! Anyị na-etolite infographics maka ndị ahịa anyị ma chee na nke a bụ nkọwa zuru oke!
Onye kere Voltier Creative Infographic ahịa
Gịnị mere Voltier ga-eji mee nke a? Isi ihe dị na otu esi eji rụọ ọrụ Infographic. Notice na-achọpụta njikọ ahụ na saịtị ha nke na-ekwu Infographic ahịa? Nke ahụ bụ isiokwu ahịrịokwu nke Voltier ga-achọ ka e debe ya na… ka a na-ebipụta Infographic site na saịtị na saịtị, backlinks na-ebipụta maka isiokwu ahụ drive nke a ga-ebuli ogo Voltier maka nyocha ọ bụla maka mkpokọta isiokwu ahụ!
Ọ bụ SEO tactic na-arụ ọrụ mara mma! Ihe eji eme ya bu ime ka ihe omuma kwesiri ikwuputa. Nnyocha na mmepe nke na-abanye na Infographics na-ewe oge ma dị oke ọnụ. Ọ bụrụ na ị ga-eme otu, ị ga - akacha mma. Ricnye ọnụahịa nwere ike ịdị elu karịa $ 3k kwa Infographic maka nyocha emere nke ọma.
Gịnị Na-eme Ndị Mmadụ Ka Ha Soro Akara?
Jul 31, 2017 na 2:40 PM
Nke a ọ bụrụ na ị ga - abụ ezi ihe atụ nke imepụta infographic? Ọ bụ ebe niile LOL
Aug 1, 2017 na 11: 16 AM
Echere m na ọ na-aza ajụjụ ndị a na-ajụkarị. Ọ bụchaghị ụdị m, mana ọ masịrị m.